प्रेम आले चढेको गाडी दुर्घटना, आलेलाई महेन्द्रनगर पुर्याइयो
कैलालीको धनगढीमा सँस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। मन्त्री आले चढेको सु.प. प्रदेश ०१ ०० १ झ ३३३ गाडीलाई बा ४ च १३७७ नम्बरको गाडीले ठक्कर दिएको हो।
पुस २७, २०७८ १०:४२
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। कैलालीको धनगढीमा सँस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। मन्त्री आले चढेको सु.प. प्रदेश ०१ ०० १ झ ३३३ गाडीलाई बा ४ च १३७७ नम्बरको गाडीले ठक्कर दिएको हो। धनगढी बिमानस्थलबाट ६ लेन सडक क्रस गर्दै गरेको अवस्थामा आलेको गाडीलाई अर्को गाडीले ठक्कर दिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ।
गाईलाइ ठक्कर दिएर अनियंत्रित भएको कारले मन्त्रीको गाडीलाई पनि ठक्कर दिएको प्रहरीले बताएको छ। मन्त्री सवार गाडी दुर्घटनामा परेपछि अर्को गाडी प्रयोग गरेर आले महेन्द्रनगर गएका छन्। ठक्कर दिने गाडिमा सवार सबै सकुसल रहेको जनाइएको छ। गाडी चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नारायणहिटी परिसरको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा विवादमा तानिएका दाहालले मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। तर, दाहालले राजीनामा बुझाएको औपचारिक जानकारी न्यौपानेले दिएका छैनन्। मन्त्री प्रेम आलेले भने दाहालले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे। ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, राजीनामामा मलाई पनि बोदार्थ दिइएको रहेछ,’ मन्त्री आलेले भने।